रोजगारीका लागि यी ५ देश जानुहोस्, भनिन्छ यी देशहरूमा भाग्य चम्किनेछ …कुन-कुन देश हेर्नूहोस ! - Filmy Hotline
काठमाण्डौ । प्राय मानिसहरु विदेशमा राम्रो नोकरी भेटाउन सकिन्छ कि भनेर खोजी गरिरहेका हुन्छन् । तर आर्थिक रुपमा बलिया देशहरुको नियम प्रवासी कामदारहरुका लागि निकै कडा हुन्छ । तर जुन देशमा यस्ता नियम सजिला र सहज हुन्छन्,
त्यहाँ सजिलै राम्रो नोकरी समेत पाउन सकिन्छ । हामी आज तपाईलाई यस्तै केही देशहरुको बिषयमा बताउन गइरहेका छौ, जहाँ प्रवासीहरु जान तथा बस्न निकै सहज र सरल हुन्छ । साथै, अन्य देशको तुलनामा यी देशमा गएर काम गर्दा तलब समेत राम्रो पाइन्छ ।
नर्वेमा पनि सरकारको तर्फबाट कुनै पनि न्यूनतम तलबको नियम बन्दैन । हाल नर्वेमा प्रति घण्टा १६ देखि २१ डलरसम्म न्यूनतम तलब तोकिएको छ । यहाँ पनि युनियनहरुले नै यस्तो तलब तोक्छन् । नर्वे पनि कुनै समयसम्म विदेशीहरुका लागि निकै नरम देशको रुपमा चिनिन्थ्यो । तर पछिल्लो समय प्रवासीहरुको संख्या बढेसँगै यहाँको नियम समेत केही कडा भएको छ ।-ऐजेन्सी
Prevकोमल वलीको गाडी मोह : साइकल हुँदै स्यान्ट्रोदेखि स्कर्पियोसम्म
Nextधेरै वीर्य फाल्दा के हुन्छ ? फाइदा कि बेफाइदा ? – जानी राखौं !
भाबुक बन्दै नेपाल फर्किइन श्रृङखला खतिवडा : मिस वर्ल्डका कुरा खोल्दै पहिलो पटक मिडियामा यस्तो बोलिन (भिडियो सहित)
अब नेपालमै पहिलो पटक कालिजको मासु किन्न पाइने ! थाहापाउनुहोस् कति पर्छ एक केजीको ?